About Us | SNL Engineering Training Centre (Myanmar)
Nanda Lynn ကို အဖ ဦးအုန်းမြင့် နှင့် အမိ ဒေါ်ခင်စောဝင်းတို့မှ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။အထက (၂) ညောင်တုန်းနှင့် အထက (၁) မြောင်းမြတို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ မြောင်းမြမြို့ အမှတ် (၁) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အထက်တန်းစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
B.E ; M.E ( YTU)
M.E ( Engineering Management)
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မအူပင်)သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် AGTI ( Mechanical ) ဒီပလိုမာ ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် Yangon Technology University သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် B.E ( Nuclear Engineering) ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် Yangon Technology University တွင် Master of Engineering ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် M.E ( Nuclear Engineering ) ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Australia နိုင်ငံ University of South Australia တက္ကသိုလ်မှ ဖွင့်လှစ်သော Engineering Management အတန်းကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် UniSA မှပေးအပ်သော M.E ( Engineering Management ) ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
ACMV နဲ့ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ဆယ့်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ဆယ်နှစ်နီးပါး လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိတွင်လည်း ACMV Specialist Contractor အဖြစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး Design Consultant အဖြစ်ပါ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ M&E Companies များတွင် Mechanical Engineer , Project Engineer , Senior Project Engineer , Project Manager ရာထူးများထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
SNL Engineering Training Centre ရဲ့ Founder တစ်ဦးဖြစ်သလို SNL Engineering Co.,Ltd ရဲ့ Managing Director အဖြစ်လည်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
Address : No.1, 2nd Floor, Zayar Thiri Street, Hledan , Kamayut Township , Yangon.
Tel : (+95)9401 883 650, (+95)9251 430 141, (+95)9266 028 125, (+95)9254 050 198
Email : nandalynn1980@gmail.com, nandalynn@snlengineering.com
© 2022 SNL Engineering Training Centre. All rights reversed.